Shiinaha Ministop sahlanaato keydka sanduuqa iftiinka soo saarayaasha iyo alaableyda | Zhengcheng
Ministop khafiifinta saxanka sanduuqa nalka khafiifka ah wuxuu ka samaysan yahay xaashi akrilik ah oo laga keenay Japan, tikniyoolajiyad casri ah oo xariif ah, naqshad qaabaysan oo sanduuqa nalka leh saameyn fiican oo aan biyuhu lahayn iyo boodh lahayn, isticmaalka tamarta aadka u hooseeya, iyo xulashada ugu fiican calaamadaha dukaanka .
Waxyaabaha sanduuqa khafiifka ah: Xaashida acrylic ee la soo dhoofiyay, xariijimo midab khafiif ah
Magaca badeecada: Xayeysiinta xayeysiiska sanduuqa nalka tamarta lagu keydiyo
Superiorities ee sanduuqa iftiinka tamarta keydinta ee Zhengcheng acrylic
1. Naqshadeynta xariga saddexda midab leh waa mid aad u qurux badan. Sumadda cusub ee la soo dejiyey ee looxa loo yaqaan 'acrylic new' waxay leedahay midab buuxda iyo gudbinta iftiin xoog leh. Marka la barbardhigo alaabooyinka la midka ah, sanduuqa iftiinka saxiixa Zhengcheng wuu dhalaalayaa.
2. Badeecadani waa 100% biyo la'aan, maxaa yeelay waxaan isticmaalnaa naqshad goonni ah oo khaas ah oo gebi ahaanba xiran, gudaha sanduuqa nalka gabi ahaanba waa hawo, marka waxaa loo isticmaali karaa cimilada roobka, sidoo kale wuxuu dheereeyaa nolosha tuubada la hoggaaminayo.
3. Isla mar ahaantaana, badeecadani waa mid aan carro-caddeyn karin, sanduuqa nalka ayaa si isdaba-joog ah u sameysma khariidad, ka dibna barka midabka looxa ayaa gacanta lagu dhejiyaa, si badeecada la soo saaray ay u tahay mid aan habaas lahayn, oo aan saameyn ku yeelan doonin dhalaalka calaamadda, waana sahlan tahay in la nadiifiyo.
4. Shirkadeenu waxay leedahay naqshadeeyayaal xirfadlayaal ah. Marka loo eego cabbirka bakhaarka macaamiisha iyo baahida macaamiisha, nashqadeeyayaashu waxay sawiraan sawirro bilaash ah, waxayna u diraan warshadda si wax soo saar ay u sameeyaan ka dib marka labada dhinacba ay ku qancaan.
Badeecadani waxay u baahan tahay oo keliya afar tallaabo oo fudud oo lagu beddelayo tuubbada la hoggaaminayo, qalliinkuna aad ayuu ugu habboon yahay.
Hore: Bannaanka hoggaanka looxa ee looxa loo yaqaan 'acrylic signboard'
Xiga: Lawson saxeexa calaamadda dukaanka
Saxiixa Boodhka Nalalka Nalalka ah
Shiinaha Custom Box Box Saxeex
Saxeexa Khaanadda Khafiifka ah
Saxiixa Box Box Light
Bannaanka Led Light Box Saxeex
Bannaanka Laydhka Bannaanka Saxeexa
Vacuum U samaynta Sanduuqa Nalalka Nalalka
Saxiixa Boodhka Nalalka Nalalka ah, Vacuum U samaynta Sanduuqa Nalalka Nalalka, Calaamadaha Iftiiminaya, Bannaanka Laydhka Bannaanka Saxeexa, Saxeex Farmashiyaha, Calaamadaha Xayeysiinta,